AFAR Meel Oo Ay Ku Kala Badin Kartaa Real iyo PSG Kulanka Caawa Ee CL Oo La Ogaaday » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Champions League/AFAR Meel Oo Ay Ku Kala Badin Kartaa Real iyo PSG Kulanka Caawa Ee CL Oo La Ogaaday
AbDi RaHmAn AdAnI, Reporter February 14, 2018
Mid kamid ah, kulamada ugu xiisaha iyo Xamaasadda badan ee laga dheeli doono xili ciyaareedka wareega 16-ka Champions League, ayaa caawa la sugayaa waana midka ay wada qaadan doonan kooxaha Real Madrid iyo PSG.
Ciyaartaan oo lugta hore lagu dheeli doono garoonka Los Blancos, ayaa wuxuu yahay mid waxa kasoo baxa uu go’aamin doono naadiga utilaabi doonta wareega Sideed dhamaadka ee tartankaan xiisaha badan.
Madrid, ayaa waxay ubaahan tahay kulankaan inay guul ay gaarto, islamarkaana shaqabaqeeda ay ilaashato, halka PSG, ay iyadana waajib ay ku tahay inay weerar ay ku qaado Shabaqa Madrid, si ay faa’ido uhesho.
Sikastaba, waxaan halkaan hoose idin kugu soo gudbin doonaa Afar ciyaartoyd oo muhiim ah, kuwaasoo go’aamin kara Natiijadda kasoo baxda ciyaartaan, islamarkaana ah meelaha ay ku kala badin karaan naadiyaddaan.
Kylian Mbappe vs. Sergio Ramos
Daafaca dhexe ee Real Madrid, ayaa wuxuu yahay mid wajihi doona mid kamid ah da’yarada kubada cagta, kuwooda ugu halista badan waqti xaadirkaan.
Laakiin kabtanka Los Blancos, oo kaashanaya Khibradiisa, ayaa wuxuu ubaahan yahay inuu xakameeyo dhaqdhaqaaqa wiilkaan reer Franca.
Luka Modric vs. Marco Verratti
Waa mid kamid ah dagaalka ugu culus ee kulankaan ka dhici doono, waana midka khadka dhexe, iyadoona ay baahan yihiin labadaan wiil tamar badan.
Labadaan ciyaartoy oo lagu yaqaano kubadda xarago leh ayaa ubaahan in ciyaartaan ay Kooxdooda uhorseedaan inaan looga adkaan khadka dhexe.
Cristiano Ronaldo vs. Thiago Silva
Daafaca PSG, ayaa wajahaya dhibaatada ugu culus marka uu ka hor-yimaado laacibka shanta jeer ku guuleystay xidiga aduunka ugu fiican.
Laakiin, khabiirka reer Brazil, ayaa wuxuu ubaahan yahay inuu ciyaartaan si fiican ula socdo dhaqdhaqaaq walba oo uu kabtanka Portugal ciyaartaan ka sameeyo.
Neymar vs Nacho
Waa walwalka badan ugu badan oo ay qabaan taageerayaasha Los Blancos, kuwaasoo aaminsan in Nacho uusan celin karin Neymar.
Balse, kuwa qaar ayaa rumeysan in Daafacaan reer Spain uu heli karo tamar badan si uu ujoojiyo Neymar – Mar sii horeysay daafaca booskaan ka ganaaxan ee Dani Carvajal, wuxuu sheegay in Neymar aanan si naba lagu xakameyn karin.